▷ Fortnite: Iza moa i Midas
Fortnite: Iza moa i Midas
Fortnite, ny lalao video nalaza teo amin'ireo mpilalao hatramin'ny nanombohany, dia mitantara tantara mahaliana hatrany hatrany mandritra ny vanim-potoana misy azy.
Ary toy izany, tsy misy dikany ireo tantara raha tsy misy ny toetran'izy ireo. Fortnite dia miavaka amin'ny fananana endri-tsoratra manokana sy mampiavaka azy, manana ny fahaizana mandroso antsika a traikefa nahafinaritra.
Amin'ity tranga ity dia hiresaka a toetra izay mifandray amin'ny volamena, sy izay rehetra milaza ireo zavatra volamena. Io toetra mampiavaka an'i Fortnite io dia antsoina Midas, ary anio isika hiresaka momba azy.
Iza i Midas ao Fortnite
Midas dia iray amin'ireo mpilalao fototra ao Fortnite Season 2. Azontsika atao ny mahatadidy azy ho toy ny lehilahy ao ambadiky ny fitaovana Doomsday naely ary ireo bunkers volamena manodidina ny yacht.
Ity toetra antsoina hoe Midas ity, dia fitafian'i Fahalana fahita lavitra, izay azo vohana amin'ny alàlan'ny fahazoana ambaratonga 100 amin'ny Battle Pass ao amin'ny Toko 2 amin'ny vanim-potoana 2 an'ny Fortnite.
Midas: Agent Golden, Spectre ary aloka.
Midas dia manolotra fomba telo, izay azo vohana, Agent Golden, Spectre ary aloka. Taorian'ny nandravana ny maso ivoho dia aloka i Midas talohan'ny naha-specter azy.
Tantaran'i Midas amin'ny angano grika
Voalaza fa an'ny Midas fotsiny Angano grika, ary azony atao ny mihaika ny andriamanitra hafa, ary toy izany koa, miaraka amin'ny fahafaha-mamadika saika ho volamena azy izay rehetra kasainy.
Araka ny angano, ny anton-javatra farany voalaza dia noho ny fanakaikezany vitany tamin'ilay andriamanitra Dionysus izay nanome azy mazava tsara ny mety hanova zavatra sasany ho volamena raha vao mikasika azy ireo.
Na izany aza, nanapa-kevitra ny hanome ity fanomezana ity i Midas, satria lasa volamena daholo izay nokasihiny. Mba hanaovana izany dia nankany amin'ny reniranon'i Pactolus izy, nanasa tao, nahavita nanao izany tamin'ny fandaniam-bolan'ny rano nivadika ho volamena.
Aiza ireo mpizara Fortnite
Ahoana ny fomba hahatafita velona amin'ny andro voalohany ao amin'ny Rust [Torolàlana ho an'ny mpandray anjara]
Prev Manaraka 1 amin'ny 64